Forex Ido | Gịnị bụ Margin na Leverage na Forex, Mụta na FXCC
Ebube ahia na oke
Echiche nke Leverage kọwara
Ọ dị mkpa maka ndị ahịa na-enweghị uche na ndị ahịa ndị ọhụrụ na-ere ahịa n'ọdịnihu, ma ọ bụ na ọ dị ọhụrụ ịzụ ahịa n'ahịa ahịa ọ bụla, iji ghọtakwuo echiche dị iche iche nke ntinye ego na oke. Ugboro ugboro, ndị ahịa ọhụrụ adịghị enwe ndidi ịmalite ịzụ ahịa ma ghara ịghọta mkpa na mmetụta nke abụọ a ga-enwe ihe ịga nke ọma na ihe ga-esi na ya pụta.
Leverage, dị ka okwu ahụ na-atụ aro, na-enye ohere maka ndị ahịa ịkụda iji ego ha nwere na akaụntụ ha ma tinye ya n'ahịa, ka ha wee nwee ike ịbawanye uru ọ bụla. N'okwu dị mfe; ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa na-eji mpempe akwụkwọ nke 1: 100 mgbe ahụ ọ bụla dollar ha na-etinye n'ezie n'ihe ize ndụ nke njikwa 100 dollar na ahịa ahịa. Ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-eji echiche nke ntinye ego eme ka ha nwekwuo uru na ụdị ahịa ọ bụla, ma ọ bụ itinye ego.
N'elu ahia ahia, ihe onu ahia na enye bu ihe kachasi elu n'inwe ego. A na-echekwa ọkwa agụmakwụkwọ site na onye na-ere ahịa na mbụ ma nwee ike ịdị iche, site na: 1: 1, 1: 50, 1: 100, ma ọ bụ karịa. Ndị ọrụ ego ga-ekwe ka ndị ahịa gbanwee ma ọ bụ ala ha dị elu, mana ha ga-etinye ókè. Dịka ọmụmaatụ, na FXCC anyị kacha leverage (na akaụntụ ECN anyị) bụ 1: 300, mana ndị ahịa nweere onwe ha ịhọrọ nkwụsị ala dị ala.
Na 1: 1 leverage dollar ọ bụla dị na akaụntụ gị na-ejikwa 1 dollar nke trading
Na 1: 50 leverage dollar ọ bụla dị na akaụntụ gị na-ejikwa 50 dollar nke trading
Na 1: 100 leverage dollar ọ bụla dị na akaụntụ gị na-ejikwa 100 dollar nke trading
Kedu ihe bụ oke?
A maara nke ọma dị ka ezigbo nkwụnye ego maka nnọchite ahia, onye ahịa na-eme ka ego dị na akaụntụ ha, iji mepee ọnọdụ (ma ọ bụ ọnọdụ) n'ebe ahịa, nke a bụ ihe a chọrọ n'ihi na ọtụtụ Ndị na-ere ahịa na-adịghị akwụ ụgwọ.
Mgbe ahia na oke na iji ihe eji eme ihe, ọnụ ọgụgụ nke oke chọrọ iji mepee ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ kpebiri site nha ahia. Dị ka ụzụ ahịa na-eme ka ọnụ ọgụgụ ala dịkwuo mkpa. Nanị tinye; oke bụ ego achọrọ iji jide ahia ma ọ bụ ahịa. Leverage bụ otutu nke ikpughe na njirimara akaụntụ.
Ugbu a, anyị akọwawaala na oke bụ ego nchịkwa akaụntụ iji jide ahia ahụ ma kọwaara anyị na ọ bụ ihe nkwụnye ụgwọ bụ ọtụtụ nke ikpughe na nhaba akaụntụ. Ya mere ka anyi jiri ihe omuma atu iji kọwaputa uzo ozo na uzo otu oku nwere ike ime.
Ọ bụrụ na onye ahịa nwere akaụntụ na uru nke £ 10,000 na ya, ma chọrọ ịzụta 1 nza (nkwekọrịta 100,000) nke EUR / GBP, ha ga-etinye £ 850 nke oke n'akụkụ akaụntụ na-ahapụ £ 9,150 na mpaghara ndị nwere ike (ma ọ bụ oke nnwere onwe), nke a na-adabere n'otu ịzụta euro dịka. 0.85 nke obere paụnd. Onye na-ere ahịa chọrọ iji hụ na ahịa ma ọ bụ ahịa nke ahịa ahụ na-ewere ọnọdụ n'ahịa, ihe nkwụnye ego dị na akaụntụ ha. Enwere ike iwere uzo dị ka net nchekwa, maka ndị ahịa na ndị na-ere ahịa.
Ndị ahịa kwesịrị ileba anya n'ogologo (njikwa) na akaụntụ ha n'oge niile n'ihi na ha nwere ike ịba uru na ahia, ma ọ bụ kwenyesie ike na ọnọdụ ha dị na ya ga-aba uru, ma achọpụta na ahia ha ma ọ bụ ahịa ha emechila ma ọ bụrụ na njedebe nke njedebe ha mebiri . Ọ bụrụ na akụkụ ahụ daa n'okpuru ọkwa a chọrọ, FXCC nwere ike ibido ihe a maara dịka "oku dị oke". Na nke a, FXCC ga-enye onye ahịa ahụ ndụmọdụ ka o tinye ego ọzọ na akaụntụ ha, ma ọ bụ mechie ụfọdụ (ma ọ bụ ihe niile) nke ọnọdụ iji belata ọnwụ ahụ, ma ndị ahịa ma ndị na-ere ahịa.
Ịmepụta atụmatụ ịzụ ahịa, ebe ị na-ahụ na ịdọ aka ná ntị na-azụ ahịa na-echekwa mgbe niile, kwesịrị ikpebi iji ojiji na ntinye. N'izu nke oma, ihe omuma, usoro ahia ahia ahia, nke na-eji usoro ahia ahia eme ihe, bu otu n'ime isi nkuku nke oganihu ahia. Ejikọtara ya na iji nlezianya na-azụ ahịa na-akwụsị ma na-etinye iwu ego bara uru, gbakwunye na nchịkwa ego bara uru kwesịrị ịgba ume iji ihe eji eme ihe na oke, ikwe ka ndị ahịa nwee ọganihu.
Na nchịkọta, otu ọnọdụ ebe oku nwere ike ịda na ya bụ n'ihi iji iji ihe eji eme ihe, na-ezughị oke isi, ebe ọ na-ejide onwe ya maka ogologo oge, mgbe a ga-emechi ha.
N'ikpeazụ, e nwere ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi kpachasị akara oku ma site na nke kachasị dị irè bụ ịzụ ahịa site na iji nkwụsị. Site na iji nkwụsị ọ bụla na ahia ọ bụla, a chọrọ ịgbanyere akụkụ gị dị mkpirikpi.
Na FXCC, dabere na akaụntụ ECN ahọrọ, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ihe ha chọrọ, site na 1: 1 niile gaa 1: 300. Ndị ahịa na-achọ ịgbanwe ọkwa ha nwere ike ime nke a site n'itinye arịrịọ site na ebe ha na-azụ ahịa ma ọ bụ site na email gaa na akaụntụ@fxcc.net.
Leverage nwere ike ime ka uru gị bawanye uru, mana nke ahụ nwere ike ịbawanye uru gị. Biko hụ na ị ghọtara usoro ihe eji eme ihe. Chọọ ndụmọdụ onwe onye ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.